Jikọta ọnụ iji dozie nsogbu ndị ahụ
Magnetic Beads Nucleic Acid Mmịpụta
Oge PCR nchọpụta usoro
Akara / Ihe nkiri
Na February 2019, Maazị Lin Yuanzhong, onye bụbu onye ọrụ Changheng Company, ọ dị nwute na ọ na-arịa kansa kansa. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ gwara ndị ọrụ niile nọ na WeChat ụlọ ọrụ ahụ wee nye onyinye ozugbo enwere ike. Ndị ọrụ ahụ sonyekwara na onyinye na ngọzi ozi. Na-egosipụta mmekọrịta na ọbụbụenyi nke ndị ọrụ Chang Heng.
Na Ememe Oge opupu ihe ubi nke 2020, iji lụso COVID-2019 ọgụ, Companylọ ọrụ Changheng natara ntuziaka sitere na gọọmentị dị mkpa iji hazie mbido mmepụta n'ihu. Na enweghị ihe onwunwe na ike, Maazị Ge Bingda, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ, na-arụ ọrụ ehihie na abalị ịhazi mmepụta ahụ. Ndị ọrụ dị anya na-emerikwa ihe isi ike, na-etinye ndụ ha n'ihe egwu, site n'ọtụtụ ụzọ njem, laghachi na ọkwa ha.
Changheng ụlọ ọrụ e ọdịda nke aha pụtara ìhè tax na-akwụ ụgwọ enterprise na Shanghai. Nke a bụ nkwenye nke teknụzụ Changheng, kamakwa nloghachi nke ndị ọrụ Changheng niile na ọha mmadụ.N'oge gara aga 8th China (Shanghai) International Technology Import and Export Fair, ngwaahịa anyị amatala nke ọma nke mmụọ China na nka. Ajụjụ ọnụ ahụ na akụkọ.
Site na mmụba nke mgbochi ọrịa na COVID-19 na China, Healthlọ Ọrụ Ahụike Mba ahụ enyela iwu ka a na-arịwanye elu na nyocha nyocha nke nucleic acid na nyocha niile kwesịrị ma dị njikere ịnwale ga-anwale. Site na ntinye nke iwu ahụ, e guzobela ụlọ nyocha ụlọ ọrụ PCR ọkachamara na obodo dị iche iche maka mgbochi na njikwa nke COVID-19 kemgbe 2020. Site na ngwa ngwa PCR bịarutere, nsogbu ndị dị ka ikike ndị ọrụ nyocha na-adịghị ike na ụfọdụ obodo egosikwala. .
Xu Yingchun, onye nduzi nke Ngalaba Laboratory nke Hospitallọ Ọgwụ Peking Union Medical College, kwuru na a gbara ajụjụ ọnụ na njedebe nke 2020: “N’ebe ụfọdụ, ndị na-achọpụta PCR na ndị na-ewepụta acid nucleic dị, ọbụnakwa e mebere ụlọ nyocha PCR. Otú ọ dị, isi ihe dị na ya bụ ịzụ ndị ọrụ aka nke nkà mmụta ihe omimi nke pụrụ ịnagide ọrịa a. ” Ọ bụ ihe dị mkpa.
N'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ ndị ọrụ ụlọ nyocha na-enyere Xinjiang na Hebei aka kwukwara na, na mgbakwunye na ịmecha ọrụ nyocha acidic, ịkụziri ndị ọrụ ụlọ nyocha mpaghara ka ha jiri akọ rụọ ọrụ PCR bụkwa akụkụ nke ọrụ nkwado ahụ. Ya mere, na ọdịda nke ụlọ nyocha PCR, ọrụ ọrụ nke PCR akụrụngwa bụ nkwa bụ isi iji bulie ikike nke ụlọ nyocha PCR.
Dika isi ihe nchoputa nucleic acid na oria COVID-19 na China, ihe otutu PCR laborat amatala ma zuta CHM065 ezigbo oge PCR nke Corbition ma zuta ya. Na n'ihi ọrụ ya dị mma, arụmọrụ dị mfe, dị mfe iji yana arụmọrụ a nwalere oge, yana ọrụ ya dị ọtụtụ n'ịntanetị, o doro anya na ndị ọrụ nkuzi họọrọ ya dị ka ihe atụ nkuzi PCR, n'akụkụ niile nke mba, na ụwa dum ibido nnukwu ọrụ nke ịzụ ụgbọ elu.
Post oge: Mee-17-2021
Changheng technology e hiwere na 2001 site Foxconn mbụ ìgwè nke ebu imewe, nhazi na n'ichepụta ọkachamara otu.
Bara uru Link
Kpọtụrụ anyị katalọgụ
Adreesị: Mba. 109, Dong kai Road, Dongjing Industrial Mpaghara, Songjiang District, Shanghai, China